तिहारको सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस् यी कुरा| Corporate Nepal
कात्तिक ३०, २०७७ आइतबार ०८:४३
काठमाडौं । कतिपयले तिहारका लागि सपिङ गरिसक्नुभएको छ भने कतिपयको सपिङ भइसकेको छ । यदी तपाईं सपिङको तयारी गरिरहनुभएको छ भने केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । धेरैले घरका लागि ठुला ठुला सामान पनि तिहारमा जोड्नुहुन्छ । यो तिहारमा तपाईंले आफ्नो सपिङलाई किफायती र प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्ट ।
तिहारको सपिङको लागि बजार जानुभन्दा अघि बजेट तय गर्नुहोस् । बजेट भन्नाले कुन सामानमा कति रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिन्छ मूल्यांकन गर्नुहोस् । यसले अनावश्यक खर्चलाई रोक्छ । यसको अर्काे फाइदा के भने, पैसाको बचतसँगै थोरै रकममा धेरै सामान किन्ने अड्कल पनि हुन्छ ।
अफरमा ध्यान दिनुस्
तिहारको अवसरमा विभिन्न कम्पनीले अफर ल्याएका हुन्छन् । सम्बन्धीत कम्पनीको अफसियल वेबपेज हेर्नुभयो भने अफरको बारेमा राम्रो अपडेट लिन सकिन्छ । जसले तिहारमा अफरको सदुपयोग गर्ने मौका मिल्नेछ ।
सही समयमा जानुस्
तिहारको सपिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तिहारकै दिन जानुहुँदैन । सकेसम्म तिहार वा भाईटिकाको अघिल्लो दिन जानु उचित हुन्छ । यसले भिडभाडबाट जोगाउनुका साथै रोजेको सामान खरिद गर्न सजिलो हुन्छ । यदी सोही दिन जानुपरेमा पनि अलि ढिला जानुपर्छ । ढिला जाँदा व्यापारीले सामान सस्तोमा दिने सम्भावना रहन्छ । किनभने तिहारको सामान नबिकेमा उसले एक वर्ष घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
अरु वर्षभन्दा फरक छ यसपाली
यसवर्षको तिहार अन्य वर्षको भन्दा फरक छ । कोरोना महामारीका कारण भेटघाट, आवतजावत जोखिमपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा सपिङको लागि जानुपरेमा मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य बोक्नुहोला । साथै भौतिक दुरी कायम गरेर किनमेल गर्नुपर्छ । सकेसम्म बिहान–बेलुका सपिङमा निस्कनु हुँदैन । किनभने सबैभन्दा भिडभाड हुने समय यही हो ।
खाने तेलको मूल्य बढ्याबढ्यै, दलहरुलाई चुनाबका लागि चन्दा दिन मूल्य बढाइयोः महर्जन
बजार भाउ बढ्याबढ्यै, सरकार राजनीतिक मुद्दा मिलाउन अलमल
अनलाइन व्यापारका नाममा उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढेपछि कडा कानुन ल्याउने तयारी
मंसिर २७, २०७७ शनिबार
'दराज १२.१२' मा सिम टिभी र डिशहोमको सहकार्य
खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएन, कुनमा कति ?
काठमाडौंमा मानिसहरु थपिएसँगै कालिमाटीमा तरकारीको आपूर्ति बढाइयो
सडक कस्को कब्जामा जाँदैछ ? गणतन्त्र पक्षधरकोमा ? वा राजसंस्था पक्षधरकोमा ?